Xukuumadda Federaalka oo ugu danbeyntii ka hadashey sarkaalkii Itoobiya loo dhoofiyey iyo Jamhadda ONLF • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Xukuumadda Federaalka oo ugu danbeyntii ka hadashey sarkaalkii Itoobiya loo dhoofiyey iyo Jamhadda ONLF
Xukuumadda Federaalka oo ugu danbeyntii ka hadashey sarkaalkii Itoobiya loo dhoofiyey iyo Jamhadda ONLF
September 6, 2017 - By: HORSEED STAFF
Raysalwasaare Xasan Cali iyo ku xigeenkiisa Khadar, shirkii looga hadley ONLF
Golaha xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta isugu yimid shir dheeraad ah, waxaana shirka looga hadley arrimo la xiriira heshiisyadii dhexmarey Dowladda Itoobiya iyo Soomaaliya laga soo bilaabo sanadkii 2015 iyo xaaladda sarkaalkii ONLF ee Itoobiya loo gacan geliyey, iyo weliba mowqifka Soomaaliya ka taagan tahay jamhadda ONLF. Warka ka soo baxay Golaha Xukuumadda, marna laguma soo qaadin magaca Cabdikariim Sheekh Muuse, waxaana lagu gaabsadey sarkaal ONLF ah.
Golaha Wasiirada ayaa sheegay in uu jirey heshiis u dhexeeyey Soomaaliya iyo Itoobiya xiligii Xasan Sheekh Maxamuud oo uu saxiixay Wasiiru Dowlihii Madaxtooyada Mahad Salaad oo hadda kamid ah Xildhibaanada sida weyn uga qayliyey Sarkaalka ONLF ee loo gacan geliyey Itoobiya, heshiiskaas ayaa qoraya in labada dal si wada jir ah uga hortagaan labada urur ee ONLF iyo al-Shabaab oo ay u wada aqoonsadeen argagixiso.
Shirka waxaa ka soo baxay go’aamo 7 gaaraya hoos ka akhri iisaga oo faah-faahsan
WARSAXAAFADEED – GO’AAMO
In Siyaasada Dowladda Federaalku ay tahay mid ku qotonta iskaashi dalalka geeska Afrika ah, xoojineysana nabad ku-wada-noolaanshaha mandaqadda, xoojinta dhaqaalaha, iskaashiga iyo amniga, isla markaasna aan Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya loo oggoleyn in jabhado hubeysan ama kooxo argagaxiso ah ay gabbaad ka dhigtaan.
Golaha Wasiirradu waxey hoosta ka xarriiqeen in shaqsigani uu ahaa sarkaal sare 00 ka tirsan Jabhadda hubeysan ee ONLF, isla markaasna uu falal lid ku ah amniga dalka uu ka dhexwaday geyiga Soomaaliya iyo mandaqadda, iskaashi dhowna la lahaa kooxaha araga-gixisada ee Al-Shabaab.
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay diyaar u tahay in ay kaalin firfircoon ka ciyaarto wax walba oo ka qeybqaadanaya nabadeynta mandaqada si waafaqsan Dastuurka iyo Shuruucda dalka. Dawladda Federaalka Soomaaliya waxey garowsan tahay doorka ciidamada waddamada deriska ah ee Djibouti, Kenya, Ethiopia, Burundi iyo Uganda ay si hagar la’aan ah uga garab-dagaalamayeen ciidamada Qaranka Soomaaliyeed si dalka loogu soo dabaalo xasilooni waarta.
Golahu waxuu mar kale hoosta ka xarriiqay heshiiyadii iskaashi ee ay Dawladda Federaalka Soomaaliya iyo Dawladda Federaalka Ethiopia ay kala saxiixdeen sida heshiiskii 07dii Juun 2015kii iyo heshiikii 2dii May ee 2016 oo tilmaamaya in dhan looga soo wada jeesto arrimaha amniga iyo nabad ku wada noolaanshaha mandaqadda. Heshiisyadan waxey si cad u qeexayaan “In cadowga labada dhinac ee Al-Shabaab iyo Jabhada ONLF ay khatar ku yihiin amniga labada dal, meelna looga soo wada jeesto oo labada dal ay iska kaashadaan si wada jir ahna ula dagaalamaan”.
Waxaa reebban isla markaasna mamnuuc ah in Jamhuuriyadda Soomaaliya gudaheeda ay kooxaha argagaxisada iyo kooxaha hubeysanba ka dhigtaan gabbaad ay dagaallada iyo collaadaha ka huriyaan oo ay kaga duulaan wadammada jaarka ah.
Dawladda Federaalka Soomaaliya waxa ay ka qaadi doontaa tallaabooyin cad-cad oo Sharciga waafaqsan cid kasta oo isku dayda in ay jabhado hubeysan ka dhex abuurto dalka gudihiisa ama ay taageeraan kooxo argagaxiso ah iyagoo maleegaya falal lid ku ah dalka gudihiisa ama/iyo waddamada jaarka ah.
Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxa ay dib-u-eegis ku samaynaysaa Heshiisyadii ay dawladdii hore gashay si qabyo-tir loogu sameeyo wixii galdaloolooyin ah ee ku jira (haddii ay jiraan) loona waafajiyo habraac-yada Sharci ee dalka.